Nandeha bisikileta nankany Amsterdam tamin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby 3 ora | Save A Train
Home > Travel Europe > Nandeha bisikileta nankany Amsterdam tamin'ny alàlan'ny fiaran-dalamby 3 ora
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 14/05/2020)
Marina fa misy mihoatra ny fomba iray mba hahatratra Amsterdam avy any Paris. Ary raha avy izy rehetra ny mpanohana sy maharatsy ny mifampiresaka, Travel from Paris ho any Amsterdam lamasinina mbola ny safidy tsara indrindra rehefa manao ny fampitahana. Izahay manome anareo rehetra ny antony fiaran-dalamby Tsidika dia tokony ho safidy voalohany, indrindra fa raha te ho tonga any Amsterdam soa aman-tsara avy any Paris sy amin'ny fomba fanoratra sy ny fampiononana.
Paris ho any Amsterdam lamasinina vs. Ireo fomba hafa ny Travel
Ny fitsangatsanganana fiara hatrany Paris mankany Amsterdam dia tsy isalasalana a tsara tarehy fiara. Na izany aza, izany ihany no dikany raha manam-bola ny fotoana sy matoky ampy hamakivaky ny lalana eo amin'ny tanàna roa.
Na inona na inona izay lalana no hitondra eo amin'ny fiara diany avy any Paris ho any Amsterdam, misy motorways, Peazy, ary fanjifana solika ny mieritreritra momba ny. Ny fiara dia afaka mitondra ny 6 ora, amin'ny tsara indrindra; ka ianao no mila manampy drafitra ho amin'ny fitsaharanao fiatoana. koa, Diniho izay miasa eo sy ny solika ilaina teny an-dalana, ary koa ny sakafo antoandro fiatoana. Ireo fandaniana rehetra dia afaka ary manampy ny.
Mety hihevitra naka ny fiara fitateram-bahoaka satria efa nandre izany no fomba mora indrindra mba handeha ho any Amsterdam avy any Paris. Raha marina izany, ny diany haka efa ho 7 ora. Izay no ela fa teny an-dalana. Ary aza dia hahatsapa intsony satria ianao ety amin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny toerana voafetra hifindra manodidina.
Nisy ihany koa ny safidy ny fiaramanidina avy any Paris ho any Amsterdam. Fa raha ny sidina dia haka adiny iray ihany sy 15 minitra, tsy manolotra mitovy mitovy amin'ny dia an-tanety. Raha tsy ianao in Voalohany Class, hahita ny tenanao nifanizina amin'ny seza aina fiaramanidina.
Misy ihany koa ny tsy misy tsara tarehy Eoropa toerana manodidina hankafy rehefa mandeha fiaramanidina. Ny ankamaroany ianao manana ny rahona ivelany mba hijery raha hitranga dia hipetraka amin'ny seza am-baravarankely; raha tsy izany, dia afaka miantehitra amin'ny iray in-fiaramanidina sarimihetsika mba hiaro anao nampiantrano. Ary aza adino fa raha fandehanana amin'ny fiaramanidina dia ara-teorika ny fomba haingana indrindra mba ho any Amsterdam avy any Paris, mbola mila nahatonga ny fotoana sy ny vola dia atao mba hahatongavana any amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny fampiononana sy ny fahazoana an'i Paris mankany Amsterdam amin'ny alàlan'ny lamasinina
Rehefa mivoaka avy any Paris mankany Amsterdam, Fiaran-dalamby miaraka amin'ny lamasinina Thalys dia manolotra ny tsara indrindra amin'ny tontolo rehetra. Izany arguably ny aina indrindra sy ny fomba mety mba handeha noho ny nampiofana haingam-pandeha. Afaka mihetsika manodidina ny fiaran-dalamby ianao nefa tsy mahatsapa ny fandehanana azy.
Ho mahatsapa ihany koa ianao rehefa mandeha lamasinina, satria fantany ianao tsy fizarana ny lalana sy ny làlambe amin'ny Sahisahy ratsy mpamily. Ary amin'ny hafainganam-pandeha ny 300 km isan'ora, no tonga ny toerana halehany amin'ny antsasaky ny fotoana dia mety haka ny fiara na fiara fitateram-bahoaka. Fiarandalamby haingam-pandeha no mahazo anao avy any Paris Amsterdam in 3 ora sy 19 minitra. Ary tsy toy ny fiaramanidina, dia hanana ny Eoropa mahatalanjona ambanivohitra mankafy.
Boky ny lamasinina tapakila mialoha, ary afaka mankafy ny tahan'ny mora indrindra, kevitra nandeha fiarandalamby ny safidy ara-toekarena kokoa raha manomana.
Amin'ny fitsangatsanganana miaraka Thalys lamasinina, dia afaka mividy tapakila hatramin'ny 90 andro talohan'ny ny Travel daty sy hamonjy niakatra ho any 75% ny saran-dalana raha hamandrika ny toerana tany am-boalohany.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-paris-amsterdam-train%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys soso-kevitra trainjourney Tranride fiarandalamby tendron'ny fampiofanana fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra fiaran-dalamby nankany Travel travelamsterdam traveltips